izinto obungazi ukuba ungazenza ngepani yentsimbi
Ukuba ungumnini webhongo le-pan yentsimbi, ke sele uyazi ukuba loluphi utyalo-mali olulungileyo. Xa sele ilungiswe kakuhle, inokupheka malunga nayo nayiphi na into ukusuka kwiipancakes ukuya kwinkukhu ethosiweyo, inokuhamba isuka esitovini iye kwi-oveni ngokulula, iphantse ingonakali, ayibizi kwaye ibambe ubushushu bayo ...
Ingqwalaselo: I-129th canton fair isondela, kwaye siyakulinda kwi-3.1m05
I-129th canton fair iya kubanjwa kwi-Intanethi ngo-Epreli 15, 2021, xa inkampani yethu izakuya ngexesha. Inombolo yethu Booth ngu 3.1m05, sijonge phambili kutyelelo lwakho kunye nokubonisana nathi.
Ulawulo loMgangatho weti teyiti yentsimbi
Ulawulo lomgangatho wentsimbi yentsimbi: Ngokuphathelele kwiSikhalazo sentsimbi yentsimbi yentsimbi elahliweyo: Umhlwa yeyona ngxaki ibaluleke kakhulu, kwaye siyifumene indlela yokuyisombulula. Pls akukho xhala. Imveliso yethu isiqinisekiso soMgangatho. Pls jonga umfanekiso ngolu hlobo lulandelayo:
Ujongana njani nezinto zokupheka zentsimbi ezisetyenzisiweyo
Izibonelelo zentsimbi yeti
Kungekudala emva kokuba ndiqale ukudibana neti, umhlobo wandazisa kwiketile emnyama yentsimbi yaseJapan, kwaye kwangoko ndatsalwa kukungcamla okuqhelekileyo. Kodwa andizazi izibonelelo zokuyisebenzisa, kwaye imbiza yentsimbi inzima kakhulu. Ngokuqonda kwam ngokuthe ngcembe iiseti zeti kunye nomsitho weti ...
Ngaba aba bapheki bexabiso liphezulu ngaba kulula ukuzisebenzisa kuneemveliso eziqhelekileyo ezinamakhulu ee-yuan? Kutshanje, abathengi abaninzi baxele kwiphephandaba lethu ukuba ezinye zezinto ekuthiwa ziphezulu kunye nesibhakabhaka ngexabiso eliphezulu azikho lula ukuzisebenzisa, kwaye nefuthe lokusetyenziswa lahluke mpela ...
Intengiso eshushu i-enamel tetsubin itiapot yaseTshayina iphosa ityhubhu yentsimbi
Iipropathi zokugcina ubushushu zentsimbi zivumela iitapoti zethu ukuba zigcine iti kubushushu obuchanekileyo bokusebenza ukuya kuthi ga kwiyure Ukufakwa kwentsimbi engenasici ngaphakathi embizeni. Ukwakhiwa kwesinyithi esinzima kuya kugcina ubushushu kwaye kugcine iti yakho kubushushu obuchanekileyo bokukhonza. Le Cast yentsimbi iti imbiza w ...
izinto obungazi ukuba ungazenza ...